ရန်ကုန်မြို့မှ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင် "Bushido" ကိုအားပေးကြပါ။ | Su See Yar
ရန်ကုန်မြို့မှ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင် "Bushido" ကိုအားပေးကြပါ။
ပင်မစာမျက်နှာ / ရန်ကုန်မြို့မှ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင် "Bushido" ကိုအားပေးကြပါ။
Boshido သည် ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက စတင်ဖွင့်လှစ်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကပဲ လာရောက်အားပေးကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယခုလို Corona ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အကြပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ ဆိုင်ဆက်လက်ရောင်းချဖို့ အတွက် အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက ထမင်းဘူးစနစ်နဲ့ပဲ ရောင်းချနေရပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကလာတဲ့သူ တော်တော်များများလည်း ဂျပန်ကို ပြန်သွားကြတဲ့အတွက် ပုံမှန်ဝင်‌ငွေထက် ၈၀% နီးပါးလျှော့ကျသွားပါတယ်။
(၁) ရန်ကုန်မှာကျန်ရစ်နေတဲ့သူတွေကို ဂျပန်အစားအစာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးချင်ပါတယ်။
(၂) ကျန်ရစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကို ဆက်လက် ထောက်ပံ့ပေးချင် ပါတယ်။
(၃) ဂျပန်ကိုခနပြန်သွားရတဲ့ ဖောက်သည်တွေကိုလည်း ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာ အပြုံးနဲ့ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရောဂါကူးစက်သူအရေအတွက်က နည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာတင် မြို့နယ်အလိုက်, တိုက်အလိုက် Lockdown ကန့်သတ်တာတွေ၊ ခရီးသွားလာမှုပိတ်ပင်ထားတာတွေ၊ ညမထွက်ရအမိန့်တွေနဲ့ ကန့်သက်လိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကာလတွင် ဝန်ထမ်းတွေဟာ အိမ်ကိုပြန်ကြပြီးတော့ နေရာတိုင်းမှာ Lockdown တွေချထားတဲ့အတွက် ရန်ကုန်ကို ပြန်လာလို့မရဘူး ဖြစ်နေခဲ့လို့ ပြန်ဖွင့်လို့မရသေးတဲ့ ဆိုင်တော်တော်များများရှိနေပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးများအတွက် ဂျပန်အစားစားတွေက ဇိမ်ခံစားသောက်ကုန်တွေလိုမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်တို့ တွေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရတာတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်ခဲလာတဲ့ကြားထဲက ကြိုးစားအားထုတ်ပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက် ဆိုင်ကိုဆက်ပြီး ဖွင့်လှစ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Takushi Kidoguchi, Yoko Jinno
သတ်မှတ်ပမာဏ - မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀ ကျပ်
အသုံးပြုမည့်နေရာ - Corona ကူးစက်ရောဂါအကြပ်အတည်းကာလအတွင်း လုပ်သားအရင်းအနှီး (ငှားရမ်းခ၊ လုပ်အားခ၊ ဝယ်ယူမှု) တို့အသုံးပြုရန်အတွက် မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀ ကျပ် အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောနေ့ - ဇွန်လ ၃၀ ရက် ( ၃၀ရက် ၆လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်
(၁) မြန်မာငွေ ၇သောင်း ကျပ် (70,000 MMK) အတွက်
Bushido "Cheers set" နဲ့ ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ cheers!
မြန်မာငွေ ၇သောင်း ကျပ် (ဂျပန် ယန်း ၅၀၀၀ ဝန်းကျင်) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်သူများကို Bushido "Cheers set" (မြန်မာ ဘီယာ 350ml ဗူး ၂ဗူး နှင့် အမြည်းများ) ကိုပေးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Zoom နဲ့ Cheers ! Bushidoမှ ခံစားချက်လေးများနှင့် ပျော်ရွှင်ပါ။
(၂) မြန်မာငွေ ၁သိန်းခွဲ ကျပ် (150,000 MMK) အတွက်
Bushido မှ အဝသောက်၊ အဝစား! (တစ်‌ယောက်စာ)
မြန်မာငွေ ၁သိန်းခွဲ ကျပ် (ဂျပန် ယန်း ၁၁,၀၀၀ ဝန်းကျင်) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်သူများကို ၁ညတာ အဝသောက် အဝစား လက်မှတ် (တစ်‌ယောက်စာ) ကိုပေးဆောင်ပေးမှာပါ။
※ နောက်ဆုံးသက်မှတ်ရက်က ၂၀၂၀ခုနှစ် ၁၂လကုန်ထိပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ ဂျပန်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလို့မရတဲ့အတွက် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကိုနောက်ဆုတ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
(၃) မြန်မာငွေ ၄ သိန်း ကျပ် (400,000 MMK) အတွက်
Bushido မှ အဝသောက်၊ အဝစား! (၄ ယောက်စာ)
မြန်မာငွေ ၄ သိန်း ကျပ် (ဂျပန် ယန်း ၃၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်သူများကို ၁ညတာ အဝသောက် အဝစား လက်မှတ် (၄ ယောက်စာ) ကိုပေးဆောင်ပေးမှာပါ။
(၄) မြန်မာငွေ ၁၃ သိန်း ကျပ် (1,300,000 MMK) အတွက်
ဆည်တော် (မမြင့်မြင့်ခိုင်၏ ဇာတိ) မှာ ၃ညအိပ် ၄ရက် တွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွေ့အကြုံခရီစဉ်ကိုဖိတ်ကြား!
မြန်မာငွေ ၁၃ သိန်း ကျပ် (ဂျပန် ယန်း ၁၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်သူများကိုအထူး အထူးအတွေ့အကြုံကို လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မကွေး၏အရှေ့တောင်ဘက်၊ မီးရော ရေ‌ရောမရောက်တဲ့ ရွာငယ်လေး ဆည်တော်။ Bushidoဆိုင်ရဲ့ မျက်နှာဗန်းသမီးငယ် မမြင့်မြင့်ခိုင် ရဲ့ဇာတိမြို့မှာတော့ အမျိုးမျိုးသော စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ နွေးထွေးသော ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်များကိုဖြတ်သန်းကြစို့။
<< လုပ်ငန်းစဉ် >>
ပထမရက် : ရန်ကုန်တိုင်းမှ မကွေးတိုင်း တောင်တွင်းကြီး ‌ မြို့ ထိကားနှင့် သွားမည်။ (တောင်တွင်းကြီး မြို့တွင် နေထိုင်မည်)
ဒုတိယရက် : ဆည်တော် ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် နှမ်းဆီထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာမည်။ ညပိုင်းတွင် ရွာသူရွာသားများနှင့် ဆုံစည်းပွဲပြုုလုပ်မည်။(တောင်တွင်းကြီး မြို့တွင် နေထိုင်မည်)
တတိယနေ့ : ပျူတို့၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သော ပိဿနိုး နှင့် တောင်ငူ မြို့သို့အလည်အပတ်သွားမည်။ (တောင်ငူတွင် ညအိပ်အနားယူမည်။)
စတုတ္ထနေ့ : ရန်ကုန်သို့ပြန်လာမည်။ ဆည်တော် ကျေးရွာမှ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များဖြစ်သော ငရုတ်သီးဆီနှင့် moromi miso တို့ကို မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်မည်။
*အထက်ပါခရီးစဉ်သည် ရန်ကုန်မှစတင်ထွက်ခွာပြီး ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်ထွက်ခွာမည့် ရက်စွဲကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။
MMK 70,000 x 5.7 回という解釈でもいいですか。いずれにしても僅かですが、耐えてください。ゴールド会員がプラチナなること夢みてます。ははは。
こんにちは。 フジタの松本です。 武士道さんにはお世話になっております。 いつも美味しい料理をありがとうございます！ 先が見えない状況ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。
いつもお世話になっております。 大きな金額でなく申し訳ないですが、いつもお世話になっているほんの気持ちです。 お互い頑張りましょう。
コロナで大変な状況ですが、皆さんの笑顔のためにも踏ん張ってください。ミャンマーが外人の受け入れを再開しましたら、私もミャンマーに戻る予定です。 皆さんと再会できること楽しみにしてます。 それまで、Stay Safe & Healthyで、頑張りましょう。 市橋
I love Bushido(*^^*)
武士道の皆さん頑張って下さい。 帰緬出来たら直ぐによります。 中尾弘二＆恵津子
木戸口さん、元気にされていますか？ 日本はGW明けて少し緩んできてますが、ヤンゴンはまだまだ厳しい毎日が続いていることと思います！健康にはお気を付けください！！ ヤンゴンで再会できるのを心待ちいいしております。
Yoneda Tomio様の手渡し分です。 10万チャットがないので15万チャットにしています。
平素、休日を中心にお世話になってます。 頑張ってください。 武士道ファンの一人です。
140.4L MMK Funded
မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်း ကျပ် ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်သူများကိုအထူး အထူးအတွေ့အကြုံကို လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မကွေး၏အရှေ့တောင်ဘက်၊ မီးရော ရေ‌ရောမရောက်တဲ့ ရွာငယ်လေး ဆည်တော်။ Bushidoဆိုင်ရဲ့ မျက်နှာဗန်းသမီးငယ် မမြင့်မြင့်ခိုင် ရဲ့ဇာတိမြို့မှာတော့ အမျိုးမျိုးသော စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ နွေးထွေးသော ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်များကိုဖြတ်သန်းကြစို့။